Kora Hooggansa MMWO fi MMO | Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa
Hooggansi Mana Murtii Waliigalaa fi Manneen Murtii Ol’aanaa Oromiyaa Ebla 11 hanga 14 bara 2013 tti kora dhimmoota jajjaboo adda addaa irratti mari’atu gaggeessaa turaniiru.
Haaluma kanaan dhimmi jabaan korri kun sadarkaa jalqabaa irratti mari’ate sadarkaa raawwii hojii Manneen Murtii Naannichaa hanga kurmaana 3ffaa bara 2013 tti jiru dha. Marii kanaaf akka tolus Manneen Murtii Ol’aanaa cuunfaa gabaasa raawwii hojii Manneen Murtii Godina isaanii akka dhiyeessan erga taasifamee booda mariin bal’ina qabu irratti gaggeeffameera; dhuma irrattis dhimmoota kurmana hafe keessatti xiyyeeffannoon irratti hojjatamuu qabu ilaalchisee kallattiin hojii pirezidaantii fi itti aanaa pirezidaantii Mana Murtii Waliigalaa Kab. Obbo Gazaalii Abbaasimal fi Kab. Obbo Guyyoo Waariyoon kennameera.
Dhimmi lammaffaan korri kun irratti mari’ate hojiirra oolmaa Labsii Gumii Bulchiinsa Abbootii Seeraa Oromiyaa irra deebiin hundeessuuf bahe labsii lakk. 217/2011 kan ilaallatuu dha. Koricha irratti barreeffamni gabaabaan ciminaa fi hanqina (qawwa) hojiirra oolmaa labsichaa agarsiisuuf qophaa’e karaa Obbo Mokonnin Raggaasaa, Itti Gaafatamaa Waajjira Gumii fi Obbo Dachaasaa Kabbadaa, Itti Gaafatamaa Waajjira Naamusaa fi Inispeekshinii Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaatiin dhiyaatee jira. Hirmaattootni qawwa labsichi qabu irratti marii bal’ina qabu kan gaggeessan yoo ta’u kanuma waliin wal qabatees yaadotni furmaataa heddu dhiyaataniiru. Koreen dhimma kana irratti hojjatus yaadota ka’an akka galteetti fayyadamuun hanqinaalee labsicha keessatti mul’atan dambii fi qajeelfamoota adda addaa qopheessuun akkasumas yaadota biroo dhiyeessuun duuchaa akka deemu kallattiin gama hooggansa ol’aanaa MMWO tiin kennameera.
Dhuma irratti dhimmi xiyyeeffannoo kora kanaa ture leenjii gaggeessummaa fudhachuu ture. Kanaanis leenjiin dhimma gaggeessummaa irratti deeggarsa Dhaabbata USAID jedhamuun qophaa’e barsiisaa Yuunivarsiitii Jimmaa kan ta’an Dr. Zarihuun Ayyaanaw Birbirsaatiin kennameera.
Walumaagalatti korri guyyoota 4’f gaggeeffame kun milkaa’ina ol’aanaan kan xumurame yoo ta’u bu’aan isaas raawwii hojii itti aanu milkeessuu keessatti gumaacha guddaa ni qabaata jedhamee eegama. Kana keessattis Daayirektoreetii Qorannoo fi Atoominaa Mana Murtichaa fi Dhaabbanni USAID akkasumas qaamoleen biroo milkaa’ina waltajjichaaf shoora isaanii bahatan hundi galata guddaa qabu.